DF Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay ku qabteen 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay ku qabteen 5 xubnood oo...
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgal ku jira.
Jowhar (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu qabtay ilaa iyo Shan xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Shantan qof oo lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayay ciidanka xoogga dalka qabteen, kadib markii howlgal ka sameeyeen deegaano dhanka bari kaga beegan degmada Jowhar, sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka.
Ururka Al-Shabaab ayaa laga saaray deegaano dhowr ah, oo ay kamid yihiin; Baloog, Shamiito, Jiliyaale, Buulo-dheer, Qajafeey, War-ciise iyo kuwo kale, saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in ay hub ka furteen Al-Shabaab.
Sidoo kale, ciidamada ayaa waxaa ay fashiliyeen qaraxyo Al-Shabaab ku aaseen waddooyinka isku xira deegaannada howlgalada laga fuliyay. Waxaa howlgalka si wadajir ah u fuliyay ciidanka xoogga dalka qeybta 27 aad, kumandooska DANAB, Harmacad iyo kuwa Hirshabeele.
Ugu dambeyn, deegaannada howlgallada laga sameeyay ayaa dhammaan waxaa ay hoos tagaan degmada Jowhar, qiyaastii 30km ayay u jiraan, waana deegaanno ahmiyad balaaran leh oo Al-Shabaab in muddo ah maamulayay.